3-jumlaale Weelal-Ceebeedka-Wejiga-Feejigle-saaraha ah II-saare iyo Soo-saare | Gacan-gashi Fiican
3meelmeeris lagu tuuro Facemask-nooca II
Annagu waxaan nahay warshad, sidaa darteed gaarsiinta waa la damaanad qaaday. Wax soo saarkeena maalinlaha ah waa wajiyad 500000PCS. Amarada degdega ah qaarkood, waxaan isku dayi karnaa sida ugu fiican ee aan isugu duwi karno wax soo saarka una diyaarino amarro si aan ula kulanno shuruudaha macaamiisha Qaar ka mid ah ganacsatada dhexe, ama aqoon isweydaarsiyo yaryar oo wax soo saarkoodu hooseeyo, way adag tahay in sidan la sameeyo.
Ka ilaalinta shaqaalaha daryeelka caafimaadka iyo bukaanka cudurada faafa
Nooca II Qalliinka Facemask wuxuu bixiyaa heerka ugu sarreeya ee ilaalinta caqabadaha lagu kalsoonaan karo. Si loo hubiyo taam sax ah inta lagu gudajiro nidaamka dheereynta, maaskaro kasta waxaa loogu talagalay gabal balaaran oo sanka ah. Waxaan sidoo kale bixinnaa noocyo badan oo qalliinka ilaalinta ah, kuwaas oo intooda badani ka dhasheen iskaashi lala yeesho xirfadlayaal caafimaad oo adduunka ah.
Noocyada wajiga labaad ee loo yaqaan 'II II masks' waa waji-waji caafimaad oo ka kooban 3 difaac oo aan wax tolmo lahayn ah oo ilaaliya oo ka horjoogsanaya in walxaha waaweyn ay gaaraan sanka iyo afka markii la xidho.
Maaskarada wajiga Nooca II waxay leeyihiin waxtarka sifeynta bakteeriyada 98% *.
- Habka loo yaqaan 'Pleat style' oo leh wareegyada dhegaha.
- Wax saddex-lakab oo ilaalin oo aan tolmo wanaagsan lahayn
- Waxtarka sifeynta bakteeriyada bakteeriyada ee 98% *.
Maaskarada wajiga waa in loo adeegsadaa cabirka kale ee ka hortagga infekshinka oo ay ku jiraan gacmo dhaqidda joogtada ah si looga hortago faafidda fayrasyada. Baakad kasta waxay ka kooban tahay 50 waji oo wejiga la tuuro ah.
Maaskarada noocan ah ee Nooca II ah waxay u hoggaansamaan heerka EN14683.
Magaca badeecada Maaskaro wajiga wajiga la tuuri karo
Waxyaabaha PP aan tolmo wanaagsan + dhalaal Sare afuufa + PP aan tolmo wanaagsan
Nooca EN14683 Nooca II maaskaro wajiga caafimaadka
Ma dhalays Maya
caado Maaskaro wajiga maaskaro, sanka clip, lagu hagaajin karaa halkii macaamiisha codsadaan,, sanduuqa gudaha, kartoonka waxaa loogu talagalay karaa by codsiga macaamiisha.
Cabir 17.5 * 9.5 cm qofka weyn
Faa'iidada Maaskarada wejiga ayaa raaxo leh in la xidho waxayna ka samaysan tahay alaab qiimo sare leh oo maqaarka ka muuqata.
Shahaadada CE iyo ISO 13485 oo ay ansixiyeen TUV
EN14683 Nooca II oo ay ansaxisay SGS
EN14683 Nooca II ayaa laga diiwaangaliyay Yurub
Muunado Muunado waa bilaash 10 gudahood
Xirxirida 50pcs / box.2000pcs / ctn ama kuwa kale
Tayada weyn ee dhalaalka duufaanta ayaa bixisa waxtarka sifeynta sare ee accuracy 98% saxsanaanta. iska caabbinta biyaha sare ee wajiga maaskaro alaabta ceyriinka ah ee aan isticmaalnay ayaa caabin kareysa biyaha. Maaskarada wejiga ayaa raaxo leh in la xidho waxayna ka samaysan tahay alaab qiimo sare leh oo maqaarka ku raaxeysanaya.
Baaxadda isticmaalka: Waxaa loo adeegsaday afka iyo sanka shaqaalaha caafimaadka qolka qalliinka si looga hortago qolofta iyo microbes-ka neefsashada inay ku faafaan nabarrada qalliinka furan, iyo in laga hortago in dheecaannada jirka ee bukaannada qalliinka lala socodsiiyo baahinta shaqaalaha caafimaadka, waxay ciyaaraan doorka bayoolojiga laba-geesood ah ilaalinta.
Xaaladaha kaydinta: Badeecadani waa in la dhigaa qol hawo wanaagsan leh, oo qabow si looga ilaaliyo nalka.
Tayada dharka dhalaalaya ayaa door muhiim ah ka ciyaara tayada wajiyadda. Qiimaha wajiyadeena ma noqon karo mid aad u hooseeya, maxaa yeelay waxaan u baahanahay inaan soo iibsano maro meltblown leh tayo la hubo, si loo hubiyo in waji galkayagu u qalmaan. Maaskaradaas oo leh qiime aad u hooseeya waxay u badan tahay inay isticmaalaan qalabka dharka meltblown ee qiimaha jaban. Haddii dharka meltblown uusan u qalmin, markaa maaskarada sidoo kale waa inay ahaato mid aan u qalmin.
Wax soo saarka 1.Tani waa adeegsi hal mar ah waana la burburin doonaa isticmaalka kadib.
Waqti kasta ka hor intaadan xirin maaskaro si aad u soo gasho aagga shaqada, waa in lagu sameeyaa kormeer cidhiidhi ah.
3.Kadib markii maaskarada wasakhaysay dhiigga bukaanka iyo dheecaannada jidhka, waa in lagu beddelaa waqtiga.
Si taxaddar leh u isticmaal kuwa qaba jirrooyinka daran ee habka neefsashada
Hore: 3ply Disposable Facemask-type I
Xiga: 3meel ahaan La Tuuri Karo Fududeynta nooca-IIR
Casaan Biyo-La-tuuri Karo oo Casaan ah
3meel ahaan La Tuuri Karo Fududeynta nooca-IIR
Facemask Madoow oo La Tuuri Karo
Right Xuquuqda -2021: Dhammaan Xuquuqda Ayaa Leedahay.